इतिहास जान्नुहोस् संयुक्त राष्ट्र एजेन्डा बुझ्न 2030: मार्टिन Vrijland
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	4 डिसेम्बर 2019 मा	• 14 टिप्पणिहरु
इन्टरनेटले हामीलाई यति धेरै जानकारी ल्यायो कि यो ज्ञानको स्रोतबाट बदलिएको छ राम्रो तोपको अनुभव गर्न। जसरी टिभी जानकारीमूलकबाट मदिरा र चिप मनोरञ्जनमा रूपान्तरण भएको छ, जोन डि मोल & को द्वारा पूरा; उदाहरण को लागी, आजकल सामाजिक मिडिया मुख्य रूप मा रमाईलो र हास्यास्पद भिडियो को बारे मा र तपाइँका साथीहरु इन्स्टाग्राम मा के गर्दै छन् हेरिरहेको बारे मा छ। थप रूपमा, यो अझ महत्त्वपूर्ण छ कि त्यहाँ सुन्दर फोटोहरू र भिडियोहरू छन् जुन अहंकारलाई शान्त पार्छ कि व्यक्ति अझै वास्तविक ज्ञान प्राप्त गर्दैछन्।
दुबै मिडिया र सोशल मिडिया सबै राम्रा महसुस गर्नका लागि छन्। यदि केहि तातो नुहाउने जस्तो लाग्छ भने, तपाईं ती मानिसहरूलाई घृणा गर्नुहुन्छ जसले ती नुहाउने ठाउँमा बरफको पानी फाल्ने गर्छन्। त्यो तपाईं डराउँछ। यद्यपि यो आवश्यक हुन सक्छ, किनकी न्यानो नुहाउने बाहिरी संसार सायद हाम्रो सोच भन्दा कम मीठो र मीठो छ, हामी बरु न्यानो नुहाउने पानीको छनौट गर्छौं। पुरानो स्थापित मिडिया र प्रमुख सोशल मिडिया च्यानलहरूले कहिलेकाँही हामीलाई नराम्रा खबरहरू दिन्छन्, तर त्यो तातो पानीको ट्यापबाट आउँदछ र यसले आनन्दलाई बाधा पुर्‍याउँदैन।
हामी हाम्रो घर सफा र आरामदायक भएको चाहान्छौं र हामी हाम्रा साथीहरूलाई भर्खरको ग्याजेटहरू, बिदा, छुट्टीको छुट्टीमा जाने बाटोहरू र सबै कुरा सोशल मिडियामा देखाउन चाहान्छौं ताकि उनीहरूले हामी कति खुसी हुन सकून्। कहिलेकाँही अरुसँग आरामदायी जीवन हुन्छ, तर उनीहरूले हाम्रो चलचित्रहरू मनपराउँदासम्म हामीसँग समूहसँग सम्बन्ध छ। जो अझै पनि 'सत्य' को लागि पर्खिरहेको छ। त्यो के हो? त्यहाँ धेरै स्रोतहरू छन्। एउटाले यो भन्छ र अर्कोले भन्छ यो केवल न्यानो पानी धारा मा रहन र सकारात्मक हुन अधिक आरामदायक छ। आलोचनात्मक मानिसहरू तातो स्नानमा चिसो पानी जस्तो हुन्छन्। ती व्यक्तिहरूसँग हरेक कुराको लागि समस्या छ जुन हामी आफैंलाई यत्तिको राम्ररी डुबाउन सक्छौं। ती नकारात्मक मानिस हुन्। “उठनुभयो? जे भए पनि यो रोक्नुहोस्। म सहि ठाउँमा छु।
त्यसैले यदि मार्टिन Vrijland जस्तै कसैले केहि भन्छ भने, तपाईं यसलाई अगाडि टाढा। सामाजिक मिडिया ट्रोल सेनाले प्रत्येक फोरम र अनलाइन छलफल मा मानक scouring रणनीति लागू गरेको छ। Negativeणात्मक शुल्कको साथ शब्दहरू भ्रिजल्यान्डसँग जोडिएको छ बिना कुनै महत्त्वको र तपाईं त्यो समूहमा सम्बन्धित हुनुहुन्न। तपाईं सामग्रीमा हेर्नुहुन्न। यदि यो ब्लग वा फोरम मा भनिएको छ कि Vrijland एक पागल षड्यंत्र विचारक हो, तपाईं यसलाई हल्का रूपमा लिनुहुन्छ। होईन, उहाँ हैन: त्यो राज्य भूमिका हो जुन त्यो अभियान पछाडि छ। यसलाई हेर्नको लागि समय। आउनुहोस्, बाहिर जानुहोस् र सामग्रीमा राम्रो नजर लिनुहोस्! तिमीलाई थाहा छ पहिले तपाईंको न्यानो नुहाउने ठाउँबाट बाहिर निस्कनुहोस्, न्यानो लुगा लगाउनुहोस् र त्यसपछि एक ताजा ताजा र शुद्ध पानी लिनुहोस्। यसले तपाईलाई राम्रो महसुस गराउँछ।
जीवनमा केहि मुख्य बुँदाहरू बुझ्न यो साँच्चिकै उपयोगी छ। जीवन तातो नुहाउने मात्र होइन। यदि तपाईं सुन्दर डु boat्गामा भोजमा उभिनुभयो र ब्यान्ड खेल्नुभयो भने, यदि टाइटानिकको हुलमा प्वाल छ भने के तपाईंलाई नाच हलबाट तपाईंको नायक बाहिर निकाल्ने व्यक्ति हो? यदि तपाईं आफ्नो इयरप्लगको साथ तपाईंको मनपर्ने संगीत सुन्नको लागि एउटा ट्रेन ट्र्याकमा उभिनु भएको छ र तपाईंले पछाडिबाट रेल आइरहेको सुन्नुहुन्न; के तपाईं एक जना हुनुहुन्छ जसले तपाईंलाई बचाउनको लागि ट्र्याकमा धकेल्नुहुन्छ? यदि तपाईंले बुझ्नुभयो कि उसले तपाईंको जीवन बचायो भने, के तपाईं खुसी हुनुहुन्छ जुन तपाईंलाई तपाईंको आराम क्षेत्रबाट हटाइएको छ? यदि सबै बाइसेन्डरहरू आई-फोनका साथ फिलिम गर्दै छन् जब तपाइँलाई आक्रमण गरिन्छ, के तपाइँ समूहबाट बाहिरका मानिसहरूसँग खुशी हुनुहुन्छ जो हस्तक्षेप गर्न दौडिए? यो छ सकारात्मक समयमा चेतावनी दिन। यो छ सकारात्मक यदि कसैले हस्तक्षेप गर्दछ। तपाईं झुकेको वास्तवमा एक आशावादी र धेरै राम्रो यदि तपाईं कहिलेकाँही सतर्क हुनुहुन्छ। यसले तपाईंको जीवन बचाउन सक्छ।
यदि तपाईं मितिमा जाँदै हुनुहुन्छ वा सम्बन्धमा प्रवेश गर्नुहुन्छ भने, तपाईं पहिले कसैको बारेमा बढि जान्न चाहानुहुन्छ। जब तपाइँ एक कम्पनी को लागी काम गर्न थाल्नुहुन्छ, तपाइँ प्राय: पहिले जान्न चाहानुहुन्छ कि तपाइँ त्यहाँ घरमा महसुस गर्नुहुन्छ भने। सामान्यतया, हामी उनीहरूको बारेमा अझ बढी जान्न चाहन्छौं जससँग हामी दीर्घकालीन सम्बन्धमा प्रवेश गर्दछौं। प्रश्न यो हो कि हामीले उनीहरूसँग हेरेका छौं जुनसँग हामीसँग पहिले नै दीर्घकालीन सम्बन्ध छ; जससँग हामी हुर्केका थियौं। यदि बच्चा जेलमा जन्मेको छ भने, जेलमा त्यो मात्र थाहा हुन्छ। यदि त्यस जेलमा खेल उपकरणहरू छन् भने, यो रमाईलो व्याकुलता र मनोरन्जन हो। बाहिरी संसार कस्तो देखिन्छ? यदि तपाईं महाद्वीपमा परिचित हुनुहुन्छ जुन तपाईं हुर्कनुभयो, यसको मतलब यो होइन कि तपाईं वास्तविक चित्र देख्नुहुन्छ। तपाईले यसलाई भित्रबाट नै देख्नु भएको छ। हो, तपाईंले यात्रा गर्नुभएको हुन सक्छ र तपाईंले धेरै देशहरू चिन्नुहुन्छ, तर प्रश्न यो छ कि तपाईंको विश्वको छवि कसरी र colored्गीन भएको छ। यो रing्ग पहिले नै पालनाबाट गरिएको हो र यस संसारको तपाईंको दृष्टिकोण शिक्षा, मिडिया र राजनीतिले रंगेको छ भन्ने अनुभूति भेदभाव गर्ने छ। तपाईलाई थाहा भएको न्यानो स्नानमा तपाईले सहज महसुस गर्नुभयो।
यदि त्यो तातो टब टाइटानिकको ब्यान्डसँग तुलना गर्न सकिन्छ भने के हुन्छ? के हुन्छ यदि तपाईंलाई मनोरन्जन मोडमा राखिएको छ ताकि तपाईं आरामपूर्वक चकित हुनुभयो? के तपाईं आफूले सिकेको धेरै चीजहरू गलत छन् भनेर हेर्न थाल्नुभयो भने? हो, मँ बुझ्छु कि तपाईं तुरून्त सोच्नुहुन्छ: “हो, तपाईंलाई यसको बारे के थाहा छ? कसले भन्छ तपाईका स्रोतहरू सहि छन्। म सरकारहरू र विशेषज्ञहरू द्वारा समर्थित आधिकारिक वैज्ञानिक रूपमा मान्यीकृत सत्यहरूमा विश्वास गर्न रुचाउँछु। तपाईं आफैंले ती सबै कहिले पनि छानबिन गर्न सक्नुहुन्न। हामीसँग यसको लागि ज्ञान छैन। "म तपाईको विचार बुझ्दछु, तर जे भए पनि यो छ वास्तवमै यसको लायक छ पत्ता लगाउन कि यदि रेल वास्तवमा तपाईं मा दगुर्छ भने। यो छ वास्तवमै यसको लायक छ तपाइँको हेडफोनबाट ट्रान्स संगीत बन्द गर्न र तपाइँको काँधमा हेर्नुहोस्। यो छ वास्तवमै यसको लायक छ जहाजले पानी बनाउँदा टायरबाट लाइफ राफ्टमा जान।
राम्रो नजर लिनुहोस्
त्यसोभए पछि हेरौं र त्यहाँ के भयो हेरौं। तपाईं समस्या लिनुहोस्। सबै पछि, काँधमा एक नजर केवल एक स्न्यापचट हो। हामी एक क्षण को लागी जान्छौं एक वास्तविक प्रयास गर्नुहोस्। कसले विश्वको बारेमा तपाइँको दृष्टिकोणलाई रंग्यो भनेर बुझ्न र तपाइँलाई न्यानो पानीको साथ सधैँ शीर्ष स्थानमा रहेको कुरा बुझ्न रोचक छ। यो पत्ता लगाउन रोचक छ कि जर्ज ओर्वेलले स्पेनिश गृहयुद्धमा लडेका थिए र पत्ता लगाए कि त्यस युद्धका उनका अनुभवहरू उनीहरूले सोचेभन्दा घरको मोर्चामा बिल्कुलै फरक भयो। चाखलाग्दो कुरा यो छ कि यस व्यक्तिले 1984 पुस्तक लेखेका थिए जसमा उनले "सत्यलाई समायोजन" गर्ने कुरा गरेका छन्। यो 1 लेखमा यो हेरफेरका केही पक्षहरूको व्याख्या गर्नु भन्दा बढि जान्छ, त्यसैले म तपाईंलाई छानबिन गर्न सल्लाह दिन्छु। विज्ञान र ईतिहासको शक्ति कसरी शक्तिको अधीनमा छन् भनेर अनुसन्धान गर्नुहोस्। के यो साँच्चिकै सत्य हो कि मौसम वैज्ञानिकहरु जसले फरक आवाज निकाल्छन कि तिनीहरू साइडलाईर्ड हुन्छन्? Ja, यस्तो देखिन्छ। के यो सत्य हो कि हिस्ट्रीोग्राफी हेरफेरको विषय हो र विन्स्टन चर्चिलले भने, "इतिहास विजेताद्वारा लेखिएको हो"? Ja, यस्तो देखिन्छ।
के भयो यदि तपाईले पत्ता लगाउनु भयो कि प्रमुख ऐतिहासिक घटनाहरू साँच्चै हेरफेर गरिएको छ? अह, हो मैले पहिले नै तपाईको प्रतिक्रिया देखेको छु। यदि प्रचार दशकौंसम्म यत्तिको शक्तिशाली भएको छ कि यसले पुस्तासम्मको लागि वास्तविकताको बिभिन्न चित्र रंगाउन सक्छ? "हो, तर तब मान्छेहरू खडा हुने थिए जसले यस बारे केही भनेका थिए?" ठिकै, यो कुरा पनि हो! केवल टिभी, अखबार, फेसबुक देखाउँदछ कि उनीहरू तपाइँ के हेर्न चाहन्छन्। एक सेन्सरशिप फिल्टर पछाडि सत्य। प्रायः सरकारहरूले प्यादहरू पनि प्रयोग गर्छन् जसले कहानी लिन्छ र यसलाई चरम समूहमा लिंक गर्दछ। यस तरिकाले तपाईं आलोचनालाई सजिलै समाजबाट बाहिर धकेल्न सक्नुहुनेछ, किनकि यदि तपाईंसँग सबै मिडिया तपाईंको जेबमा छन् भने, तपाईं व्यक्तिको धारणाको जिम्मेवार हुनुहुन्छ। हामी यो फरक तरिकाले गर्नेछौं।
मेरो सुझाव छ कि तपाइँ निम्न मुद्दाहरूको जाँच गर्नुहोस्। लेनिन (र उनका उत्तराधिकारी स्टालिन) ले काठीमा सहयोग गरेको पावर ब्लक उही पावर ब्लक हो जुन एडोल्फ हिटलरले काठीमा सहयोग पुर्‍यायो र पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धले नयाँ अर्डर सिर्जना गर्न अराजकता पैदा गर्ने योजना गरेको थियो। त्यो एक मुखमा छ। अगाडि बढ्नुहोस्।
पहिलो विश्वयुद्धमा, भूमि इस्राएलको राज्यको लागि आरक्षित गरिएको थियो Balfour बयान। मा हवारा सम्झौता 1933 बाट यहूदीहरूलाई फिलिस्तीनलाई प्यालेस्टाइनको आप्रवासनबाट पहिले नै जर्मनीको साथ रेकर्ड गरिएको थियो। दोस्रो विश्वयुद्धको केही समयपछि इस्राएलको राज्य स्थापना गरिएको थियो। दोस्रो दोस्रो युद्धले यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
उही एडोल्फ हिटलर जसले यहूदीहरूलाई कथित घृणा गर्थ्यो र व्यवस्थित रूपमा उनीहरूलाई ग्यास दिए र शुद्धता खोज्यो, एक्सएनयूएमएक्ससँग उसको सेनामा आधा र चौथाई यहूदीहरू थिए, जसमा प्रायः लडाकू अफिसरहरू थिए। ऊसँग कम्तिमा 150.000 आधा-यहूदी जनरलहरू र एडमिरलहरू थिए, उही उच्च पदहरूमा अर्को दर्जन चौथाई यहूदीहरू। सब भन्दा उल्लेखनीय उदाहरण हर्मन गोयरिंगको दोस्रो कमान्डर मार्शल ईरहार्ड मिल्च हो। लुचवेफे स्थापना गर्न मिल्चले महत्वपूर्ण भूमिका खेले। मिल्चको एक यहूदी बुबा र सम्भवतः एक यहूदी आमा पनि थियो।
त्यहाँ धेरै आवाजहरू छन् कि ग्यासहरूको छवि, जसलाई 'होलोकास्ट' भनिन्छ, एक प्रचार कथा हो, बनावटी प्रमाणहरू द्वारा समर्थित। जब तपाईं यसको बारेमा सोच्नुहुन्छ संज्ञानात्मक असन्तुष्टि तुरून्त हुन्छ। फरक ज्ञानले न्यानो नुहाउँदा चिसो पानीको गिलास जस्तो महसुस गर्दछ। के तपाईं टिटानिकको ब्यान्डबाट टाढा लैजान चाहनुहुन्छ यदि जहाज डुब्छ भने? हो, सायद।
लगाममा घोडाको लागि अन्धा मान्छे राख्नु महत्त्वपूर्ण छ, ताकि ऊ आफ्नो दासत्वको कार्यबाट धेरै अलमल्याउन सक्तैन। एक व्यक्तिको लागि ब्लाइन्डरहरू लिनु र उनीहरूको वरपरको विश्वको राम्रो तस्वीर लिन महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसो भए तपाईले भविष्यको आशा गर्न सक्नुहुन्छ। इतिहासमा छलकपटको नोट लिंदा, यसले पत्ता लगाउँदछ कि यो जनसाधारणले खेलेको उही पावर ब्लाक हो। अराजकता सिर्जना काठीमा एक आत्म-निर्मित शत्रुलाई मद्दत गर्नुहोस्। यसले तपाईंलाई उच्च लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। त्यसोभए के त्यो ब्लक ब्लकले जनसंख्या समूहलाई शिकार बनाउन एडोल्फ हिटलरलाई मद्दत गर्‍यो र तिनीहरूलाई अपरिवर्तनीय स्थिति दिन सक्षम भयो भने के हुन्छ? यदि एडोल्फ हिटलरले यहूदी वंशका मानिसहरुसंग उनीहरुलाई घेरिएको थियो यदि उनीहरु सबै लाई गैसिफाई गर्न चाहान्थे? हिटलरलाई कसले आर्थिक सहयोग गर्‍यो हेर्नुहोस्। यस वेबसाइट र अभिलेखमा तपाईं अधिक फेला पार्नुहुनेछ यदि तपाईंले खोजी क्षेत्र प्रयोग गर्नुभयो भने। अर्को राम्रो सुरुवात उदाहरणको लागि हो यो लेख। सामग्रीमा क्लिक गर्न र यसलाई अध्ययन गर्न समस्या लिनुहोस्।
दोस्रो विश्वयुद्धको लगत्तै पहिलो विश्वयुद्ध (इजरायलको राज्य) को क्रममा बाल्फोर घोषणापत्रमा आरक्षित रहेको जमिनको टुक्रामा एउटा राष्ट्र स्थापना भयो। संयुक्त राष्ट्र संघको पनि स्थापना भयो। अब प्रश्न छ: के यो सबै धेरै समयको लागि योजनाबद्ध थियो? तपाईंले आफैलाई सोध्नु पर्ने सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यो हो: के तपाईं पुरानो रोमी नियमलाई "ठूला ठूला युद्धका क्रममा क्याओस" भन्ने मान्यता दिनुहुन्छ? के हिटलरले आफैंले सिर्जना गरेको खतरनाक शत्रु हो जसले अल्लाई अलिबीलाई युरोपमा फ्ल्याट बम बनाउन र त्यो अराजकताबाट नयाँ अर्डर स्थापना गर्न सक्षम तुल्यायो? के हिटलरले इजरायलको राज्यमा ठूलो लोकप्रिय स्थानान्तरणको लागि प्रेरणा शक्ति थियो? मा पढ्नुहोस्.
हाम्रो आफ्नै राजकुमार बर्नहार्ड बिल्डरबर्ग समूहको स्थापनाको प्रमुख चालक थिए। बिल्डरबर्ग समूहले युरोपेली समुदायको आधार गठन गर्‍यो। त्यो आयोगका प्रथम राष्ट्रपति एडोल्फ हिटलरको वकिल थिए। उसको नाम वाल्टर हल्स्टिन थियो।
मैले बुझें जब तपाई सोच्नुहुन्छ:त्यो चरम अधिकार हो। म ब्रेक्सिट, Nexit fanatics सुन्न। म थिसरी बाउडेट सुन्छु"। त्यो छवि उही मिडिया र राजनीतिक प्यादेद्वारा रंगिएको छ। तिनीहरू आधिकारिक इतिहास र आधिकारिक विज्ञानको सबै आलोचनाहरू त्यो ध्यानपूर्वक निर्माण गरिएको ब्रान्ड 'दायाँ' सँग जोड्ने प्रयास गर्छन्।
यदि हामीले यो पत्ता लगाउन थाल्यौं कि हामी दशकौं उही उर्जा शक्तिद्वारा खेलेका छौं, तब हामी बुझ्छौं कि हामी लिपि देखीरहेछौं जहाँ युद्धको योजना थियो र योजना अनुसार कार्यान्वयन गरियो। हामी यो पनि बुझ्छौं कि विश्व युद्धको योजना बनाइएको छ र त्यो त्यो ठूलो लिपिको अंश पनि हो। र एकचोटि हामीले यो बुझेपछि, हामी यो पहिचान गर्न सक्दछौं कि दुबै इतिहास र विज्ञान मिथ्या मिडिया र सोशल मिडिया द्वारा बढावा दिएका छन्। यो मात्र सम्भव छ किनकि उही पुरानो पावर ब्लकसँग तपाईंको तातो नुहाउने पानी स्रोतहरूमा पूर्ण नियन्त्रण छ। के तपाइँको विश्वको धारणा उही पुरानो पावर ब्लकको धारणा प्रबन्धकहरूले र colored्ग गरीएको छ?
अर्को युद्धको योजना बनाइएको छ भन्ने तथ्य बाहेक (यरूशलेमको लागि सटीक हुनुपर्ने युद्ध), सत्तामा एउटा ठूलो परिवर्तन छोटो अवधिमा एजेन्डामा रहेको छ जुन पछिल्लो ठूलो युद्धतर्फको मध्यवर्ती अवस्था हो। सत्ता परिवर्तनको अर्थ अमेरिका अर्थतन्त्रमा खस्नेछ र धेरै असहमतिको कारण नाटोबाट पनि हट्न सक्छ। हामीले पहिल्यै देख्यौं कि असहमति ठोसमा प्रतिबिम्बित हुन्छ हिजोको छलफल। डोनाल्ड ट्रम्प र इमानुएल म्याक्रोनले लन्डनमा नाटो शिखर सम्मेलनको क्रममा उनीहरूको मतभेदको समाधान गरे।
अमेरिकाको आर्थिक मन्दीले ट्रम्पको योजनाबद्ध पतन निम्त्याउने सम्भावना रहेको छ भने ब्रेक्सिटको पतन युरोपमा युरोपियन अर्थतन्त्रको लागि हुनेछ। किनकि राजनीतिज्ञ र मिडियाले यी राजनीतिज्ञहरूलाई ध्यानपूर्वक निर्माण गरिएको ब्रान्ड (दायाँ) लाई सावधानीपूर्वक निर्माण गरिएको कलंकहरूसँग जोडेको छ, त्यस्ता आर्थिक स global्कटले अर्को भूमण्डलीकरण र विकृत विचारहरूको समाधानका लागि किकस्टार्ट दिन सक्छ। मैले त्यसलाई फेरि समर्थन गरें यो लेख र अरू धेरैमा। तपाईं त्यो फेरि पढ्न सक्नुहुन्छ।
त्यस कलमसँग सम्बन्धित एक कलंक भनेको (सावधानीपूर्वक लेबल गरिएको दायाँ-वि wing्ग) समूह हो कि 'जलवायु अस्वीकार'। सम्भवतः यो जोडिने छ कि यो समूहले पुरानो ठूला उद्योगहरूको रुचि प्रतिनिधित्व गर्‍यो, ग्लोबल वार्मिंगलाई अस्वीकार गर्ने कारणको रूपमा। "तिनीहरूले तेल उद्योग र कोइला खानीमा चासो देखाए"एक तर्क हो जुन स्थिरबाट लिने छ। र यसैले, आर्थिक क्र्यास र कलंकको संयोजनको माध्यमबाट, अन्ततः लामो योजनाबद्ध यूएन एजेन्डा 2030 (एजेन्डा 2021 को उत्तराधिकारी) को आलोचनाको सामना गर्न बाटो खोलियो।
मेरो भविष्यवाणी छ कि टर्की युरोपलाई वशमा गर्ने नयाँ महाशक्ति हुनेछ। यो अतिरिक्त सजिलो हुनेछ यदि अमेरिकामा योजनाबद्ध) आर्थिक दुर्घटना आयो र ट्रम्पले निर्णय गर्यो कि संघर्षरत युरोपलाई सुरक्षा दिन महँगो पर्नेछ (म्याक्रोनले नाटोलाई 'मस्तिष्क मृत्यु' भन्ने जस्ता चिन्ताजनक सूट सहित)। यदि युरोप आर्थिक रूपले क्र्यास हुन्छ (जसमा परिणामस्वरूप योजनाबद्ध ब्रेक्सिट पराजय), यो नाटोको बजेटमा उच्च योगदान पुर्‍याउने समस्या खडा गर्ने थप समस्या हुने छ। त्यसकारण त्यहाँ राम्रो अवसर छ कि अमेरिकाले युरोपबाट आफ्नो हात लिनेछ जुन मैले यहाँ वर्षौंको भविष्यवाणी गरिरहेको छु कि त्यहाँ ठाउँ बनाउनको लागि: ओटोम्यान साम्राज्यको पुनरुत्थान। टर्कीले शक्ति शून्यमा जान सक्छ यदि युरोप अराजकता मा समाप्त हुन्छ र जानाजानी बनाईएको समस्या को एक उद्धारकर्ता को रूप मा कार्य गर्न सक्छ।
र शक्ति र राजनीतिक परिवर्तनको हरेक परिवर्तन संग तपाईं देख्नुहुनेछ कि समान रोडम्याप सँधै धक्का दिइन्छ। जब एर्दोगानले सत्ता कब्जा गर्छ भने यो नसोच्नुहोस् हामी अचानक कडा इस्लामिक युरोप बन्छौं। होइन, हामी यसको विपरित हेर्नेछौं। हामी इस्लाम को उदारता देख्न जाँदैछौं जुन हामीले इसाईमतमा अनुभव गरेका छौं। युरोपले लिने नयाँ पावर ब्लकले इन्द्रेणी कार्यसूची मात्र लिने छ। यो इन्द्रेणी एजेन्डा हो जुन मैले मेरो पुस्तकमा वर्णन गर्दछुः लुसिफेरियन विश्व शासनको लागि मार्गचित्र, जसमा सबै विश्व धर्महरू पनि मर्ज हुनेछन्। लोगोमा इन्द्रेणी रंगहरूमा ध्यान दिनुहोस्।
त्यो इन्द्रेणी प्रमुख छ र नयाँ विश्व अर्डरको प्रतीक हो। यद्यपि टर्कीले युरोपमा दृढतापूर्वक नेतृत्व लिने छ, यसले नयाँ विश्व अर्डरतिरको मार्गचित्रलाई कहिले पनि कमजोर पार्दैन। यो, तथापि, नयाँ बनाईएको महाशक्ति शुरू गर्नेछ कि तेस्रो विश्व युद्ध rig मा मद्दत गर्दछ। म मेरो औंठाबाट बाहिर चूस्दिन। मा यो लेख म वर्णन गर्छु कि त्यो एजेन्डा पहिले नै 1871 मा कागजमा कसरी थियो। त्यो अन्तिम युद्धमा (जुन यरूशलेमको बारेमा हुनेछ), कि ओटोम्यान साम्राज्य अमेरिका र इजरायलको बिरूद्ध उठ्नेछ। यो अन्ततः संयुक्त राष्ट्र तर्फ सत्ता केन्द्रित गर्न अन्तिम निश्चित अराजकता सिर्जना गर्दछ।
आवश्यक स struggle्घर्ष हुनेछ र आवश्यक अराजकता खडा हुनेछ भन्ने तथ्यको बाबजुद, यस बीचमा राजनीतिक आन्दोलनहरूले शक्ति प्राप्त गर्नेछ जसले संयुक्त राष्ट्र एजेन्डा 2030 लाई निरन्तरता दिनेछ, सबै अशान्तिहरूको बाबजुद। त्यो एजेन्डा भनेको कठोर उपाय हो जसलाई वातावरण संरक्षण गर्नुपर्दछ, तर वास्तवमा 'चीजहरूको इन्टरनेट' मा सबै कुरा पत्ता लगाउने र डिजिटल कन्ट्रोल वेब निर्माण गर्ने लक्ष्य छ जुन कुनै पनि समय र जहिले सबैलाई ट्रेस गर्दछ। मैले त्यसलाई विस्तृत रूपमा भनें यो लेख। त्यसकारण यसलाई फेरि पढ्नुहोस्।
टायटानिक बारमा भएको ब्यान्डको आकर्षक आवाजबाट टाढा जान र जीवन राफ्टमा जानको लागि केहि प्रयास चाहिन्छ। तपाइँले यसको लागि केहि गर्नुपर्नेछ।
कृपया एजेन्डा 2030 मा पनि हेर्नुहोस् र मेरो वेबसाइटमा नजर राख्नुहोस् जुन स्पष्टसँग हेर्नको लागि कि कुन विकासहरूले सबै यस एजेन्डाको रोलआउटमा योगदान पुर्‍याउँछन्। खुल्ला यो वेबसाइट तपाइँ त्यो 2030 एजेन्डा को एक राम्रो विवरण पाउनुहुनेछ। यो पनि मेरो किताब पढ्न सुझाव दिइन्छ। यहाँ म वर्णन गर्छु कि इन्द्रेणी र लि neutral्ग तटस्थ मास्टर स्क्रिप्ट मा प्रमुख भूमिका खेल्छ। म यो पनि व्याख्या गर्छु कि कुन transhumanist एजेन्डा यसको पछाडि छ र किन यो सबैको एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) को साथ सम्पूर्ण संयोजनमा मानिसहरूलाई कैद गर्ने इच्छाको साथ छ। यो सन्देश आउँनु आवश्यक छ। म तपाईंको प्रतिबद्धता र योगदान मा विश्वास गर्दछु। समस्या लिनुहोस् र समय लिनुहोस् र उठ्नुहोस् जब तपाईं अझै सक्नुहुन्छ।
स्रोत लिङ्क सूची: paulcraigroberts.org, alt-market.com
ट्याग: 2021, 2030, एजेन्डा, EU, विशेष, वातावरण, लन्डनमा, macron, नाटो, शीर्ष, ट्रम्प, vn
4 डिसेम्बर 2019 मा 15: 47
उत्कृष्ट लेख फेरि मार्टिन। बधाई!
यहाँ मलाई लाग्छ जोहान क्रुफको प्रख्यात कथनहरू लागू हुन्छन् (यो लेखमा, मेरो विचारमा):
"तपाईंले शूट गर्नुपर्दछ, अन्यथा तपाईं स्कोर गर्न सक्नुहुन्न।"
"यदि तपाईं जित्न सक्नुहुन्न भने, तपाईंले हराउनु हुँदैन भनेर निश्चित गर्नुपर्दछ।"
"यदि हामीसँग बल छ भने उनीहरूले स्कोर गर्न सक्दैनन्।"
"तपाईं यसलाई तब मात्र देख्नुहुनेछ जब तपाईंले यसलाई महसुस गर्नुहुनेछ।"
र निश्चय पनि रूपात्मक रूपले फुटबलसँग केहि गर्न सक्दैन ..; )
डिक क्लेन ओनके लेखे:
4 डिसेम्बर 2019 मा 16: 51
धेरै राम्रो र स्पष्ट लेख। र जोसँग तपाइँको पुस्तक अझै छैन। खरीद गर्नुहोस्!
4 डिसेम्बर 2019 मा 19: 11
चिसो स्नान खराब रूपमा तल राखिएको छ, तर यो तपाइँको लागि धेरै राम्रो छ। म केहि समयको लागि चिसो वर्षा गर्दैछु र केही समय पछि यसले राम्रो महसुस गर्न थाल्छ। थप फाइदा भनेको प्रतिरोध बढ्छ र स्वस्थ हुन्छ। मस्तिष्कमा पनि लागू हुन्छ, सत्यको साथ आहार। सुरुमा चिसो महसुस हुन्छ, तर जब तपाईं यसको मार्फत जानुहुन्छ तपाईं खुशी र शुद्ध हुनुहुनेछ।
यसैले तपाईं मसँग चिसो पाउनुहुन्छ
4 डिसेम्बर 2019 मा 21: 36
यो तपाईंको भविष्य हुनेछ यदि तपाईं पछाडि हेर्नुभएन भने ...
5 डिसेम्बर 2019 मा 00: 21
प्रिय पाठक: नेदरल्याण्ड्समा तपाईको वरिपरि राम्रो नजर राख्नुहोस् र विगतका हप्ताका लेखहरू पढ्नुहोस् ...
यो नेदरल्याण्ड र यूरोप मा लगभग समय हो। के भइरहेको छ भन्ने बारे राम्ररी नियाल्नुहोस्। वास्तवमै राम्रो देखिन्छ।
होईन, टिभी वा अखबार नहेर्नुहोस्। उनीहरूले सुनिश्चित गर्दछ कि तपाईले यसलाई देख्नुहुन्न।
मेरो मतलब: साँच्चिकै राम्रो हेर्दै।
साइटमा लेखहरू यहाँ पढ्नुहोस्। मनोविज्ञान को बारे मा एक, उदाहरण को लागी।
नेदरल्याण्ड्स मा यो केवल सुस्त छ र डिजिटल शिविरहरु लाई महसुस गर्न को लागी टेक्नोलोजी चरण एक पछि बढाइन्छ।
स्मार्ट क्यामेरा, पुलिस प्लाटूनहरू, क्यामेरा सबै राजमार्गहरू माथि। ठुलो डाटा संग्रह ..
एक दिनमा तपाईले देख्ने क्यामेराको संख्या गणना गर्नुहोस्।
डच पुन: शिक्षा शिविरहरूलाई मानसिक स्वास्थ्य सेवा भनिन्छ:
> GGZ सेटिंग्स।
> युवा हेरचाह संस्था।
बाहिर सुन्दर; भित्र आतंक
5 डिसेम्बर 2019 मा 01: 02
त्यस्तै गरी तपाईं खसिनुहुन्छ। त्यो एक मीठो नाम दिइएको छ: मनोविज्ञान
5 डिसेम्बर 2019 मा 18: 15
Stasis अभ्यासहरूको कार्यान्वयन सुरु हुन सक्छ
5 डिसेम्बर 2019 मा 01: 11
विरोधी असन्तुष्टहरूको लागि GGZ "केयर ब्याग"
5 डिसेम्बर 2019 मा 01: 13
एक डच युवा पुन: शिक्षा शिविर। बाहिर सुन्दर, भित्री भित्र डर। यी लुकेका क्यामेरा छविहरू हेर्नुहोस्:
5 डिसेम्बर 2019 मा 01: 25
यहाँ पढ्नुहोस् र के हुँदैछ हेर्नुहोस्:
5 डिसेम्बर 2019 मा 01: 37
यो कहाँ जान्छ हेर्नुहोस्। वास्तवमा चीन मा मामला को जस्तै:
7 डिसेम्बर 2019 मा 00: 12
के हामी अब समग्र प्रश्न गर्न लागेका छौं, तर त्यो इरादा होइन!
मर्केलले 60 मिलियन यूरो ($ 66.6 मिलियन) को दान पनि ल्याए।
7 डिसेम्बर 2019 मा 13: 15
"कम्युनिष्टहरु" द्वारा प्रतिबद्ध रूसी क्रिश्चियनहरुमा मर्केलले कहिले प्रलय मनाउने छ? के हामी लामो समय पर्ख्न सक्छौं? ठिक छ, त्यो कसरी हुन सक्छ?
यो यदि मैले गल्तिले 1 विश्व युद्धको क्रममा भयो भने हो। यो अनुमान गरिएको छ कि कम्तिमा 40 मिलियन
इसाई मारिएका छन्। के यो पनि नेदरल्याण्ड मा एक स्मारक दिन शामिल छ? तीन पटक अनुमान गर्नुहोस्। इसाई नेताहरू के मौन छन्?
10 डिसेम्बर 2019 मा 14: 09
ओह, भ्रिजल्याण्ड, अब तपाई के गर्दै हुनुहुन्छ! त्यो त्यो पुलिस राज्यसँग त्यति खराब छैन:
« स्मार्ट टेक्नोलोजी र टेक्नोक्रेट विश्वव्यापी प्रशासनले मौसमलाई बचाउनेछ
एक पुलिस राज्यमा, तपाईं फिलिपिन्स पुलिस र "मद्दत" प्रदायकहरूमाथि प्रतिबन्ध चाहानुहुन्छ »
कुल भ्रमण: 15.890.301